Disconcerting Experience – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
နတ် လူ သာဓု ခေါ်စေသော်ဝ်
သရဖူ မဂ္ဂဇင်းမှာ “အထင်ကြီးခံချင်သူ လူတစ်ယောက်အကြောင်း”ဆိုပြီး ကုရာနတ္ထိ ရောဂါသည် တစ်ယောက်အကြောင်းကို ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့ နောက် သိပ်မကြာလှဘူး၊ အဲဒီ့လူ ကွယ်လွန်သွားတယ်။
နောက် သိပ်မကြာဘူး၊ ကျွန်တော်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ အထဲမှာ ကုရာနတ္ထိဝေဒနာရဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်ကို ခံစားနေရသူ ရောဂါသည်တစ်ဦးကို ဆုံရပြန်တယ်။
သည်မှာတင် ကျွန်တော်လည်း အတော်လေး တုန်လှုပ်သွားတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ ယောက်ျားတစ်ယောက် ဖြစ်ပင်ဖြစ်လင့်ကစား အခကြေး ငွေပေးပြီးမှ အပျော်အပါး လိုက်စားရတဲ့အလုပ်ကို လုံးဝ စိတ်ပါလို့ မရဘူး။ အနုသမားပီပီ ခံစားချက် မပါတဲ့ ကိုယ်လက် နှီးနှောမှုကို မသတီတာက ပထမအချက်ပါ။
လူပျိုပေါက်တုန်းက တစ်ခါ၊ နှစ်ခါတော့ စမ်းကြည့်ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲသလို စမ်းပြီးတဲ့ နောက်မှာ တစ်ခုခုများ ဖြစ်တော့မလား၊ ရောဂါတစ်ခုခုများ ရလာမလားလို့ ကြောင့်ကြနေရတဲ့ စိတ်အနေကို သည်းမခံနိုင်တာနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ တစ်ခါမှ မတစ်ခါမိတော့ဘူး။
အသက်ကလေး အစိတ်ကျော်လာတော့ အတွေးအမြင်က တစ်မျိုး ပြောင်းသွားတယ်။ ပြောရရင် ကျွန်တော်က နည်းနည်း စွံတယ်။ (ကြွားတာလို့ ထင်ချင်လည်း ထင်လိုက်ကြပါတော့။) အဲလို စွံတော့ကာ ခံစားချက်လေးနဲ့ နုရွရင်း ကဲလို့ ရတတ်နိုင်မှန်းကို သိသွားတယ်။ အခကြေးငွေ ပေးပြီးမှ ပျော်ပါးတယ်ဆိုတာ မစွံနိုင်တဲ့ ယောက်ျားတွေမှ လုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးလို့ ထင်လာတယ်။
အဲတော့ အခကြေးငွေပေးပြီး အပျော်အပါး လိုက်စားတဲ့ အလုပ်နဲ့ ကျွန်တော်နဲ့က ကင်းတယ်။ အသက် ၃၀ ကျော်မှ အိမ်ထောင်ကျတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့နောက်မှာလည်း ခြေက သိပ်မငြိမ်ဘူး။ ကဲတာကတော့ အခါအားလျော်စွာ ရှိနေခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမယ့် စောစောက ပြောသလို ကြေးစားတွေနဲ့ ပျော်ပါးတာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော့်ဘာသာ အိမ်ထောင်ရေးပြင်ပ အရေးအခင်းကို ခင်းကျင်းပြီး ဖောက်တာ သက်သက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ချင်တော့ ၁၉၉၃၊ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ ကျွန်တော်နဲ့ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းမက ပြဿနာ။ သူက ကျွန်တော်နဲ့ လာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ အိမ်ထောင် ကွဲပြီးခါစ။
ကျွန်တော် သတိ လစ်သွားတာက သူနဲ့ ကွာရှင်းလိုက်တဲ့ သူ့ယောက်ျားဟောင်းက မူးယစ်ဆေးသမား ရင့်မကြီး ဆိုတာကိုပဲ။ ကျွန်တော်နဲ့ သူနဲ့ ဖြစ်ကြပြီးတဲ့နောက် သူ့လမ်းသူ ဆက်လျှောက်၊ ကျွန်တော့်လမ်း ကျွန်တော် ဆက်လျှောက်နေစဉ်ကာလမှာပဲ အဲဒီ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်း ကုရာနတ္ထိရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ သတင်းကို ကြားလိုက်ရတယ်။
အဲသလိုလည်း ကြားရရော ကျွန်တော်လည်း ပျာသွားပါတော့တယ်။ ဒါနဲ့ ၉၄ နှစ်ဦးမှာ သွေးဖောက်စစ်မိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့တုန်းကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိနေသလိုပဲ၊ ဘာမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို ပြောပါတယ်။
ဆေးစစ်ချက်ထွက်လာတော့ ကျွန်တော် ယုံတဲ့ အတိုင်းပါပဲ၊ ကျွန်တော့်မှာ ကုရာနတ္ထိ ရောဂါပိုး ရှိမနေပါဘူး။
အဲဒီ့အရေးအခင်းဟာ အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ကျူးလွန်မိတဲ့ ဒုတိယအရေးအခင်းပါ။ အဲဒါပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ကျွန်တော်တစ်ယောက် အတော်လေး အပိုးကျိုး သွားပါတော့တယ်။ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုတွေကို ဆက်လက် မကျူးလွန်ဖြစ်တော့ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အကုသိုလ်အမှုတွေ ပြုဖူးသူမို့ထင်ပါရဲ့၊ ၁၉၉၄ နှစ်လည်မှာ ယာဉ်တိုက်မှုတစ်ခု အကြီးအကျယ် ဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ ဖြစ်တဲ့နေရာက ရန်ကုန်-မန္တလေး အဝေးပြေး လမ်းပေါ်မှာပါ။ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့ နေရာအနားမှာ ရှိတဲ့ ကျေးရွာ ရဲစခန်းကနေ ကျွန်တော့်ကို ပြည်သူ့ဆေးရုံကို ခေါ်သွားပါတယ်။
ဆေးရုံကို ရောက်တော့ ကျွန်တော့်ကို မေးခိုင်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးပါတယ်။ မီးပျက်နေတဲ့အတွက် ညစ်ထေးထေး အပ်ကို စနစ်တကျ ပြုတ်ထားသလား၊ မပြုတ်ထားဘူးလားဆိုတာ ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ မဝေခွဲနိုင်ပါဘူး။ မပြုတ်ထားဘူးဆိုရင်လည်း ကျွန်တော့်မှာ ဆေးအထိုး မခံဘူးဗျာလို့ ငြင်းလို့ ရနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိမနေခဲ့ဘူး။
ပိုဆိုးတာက ကျွန်တော့်ခေါင်းက ဒဏ်ရာကို စစ်ဆေးပြီး ဆေးထည့်ဖို့အတွက် ဆံပင်တွေကို ရိတ်တဲ့အခါမှာပါ။ ဆံပင်ရိတ်တာကို မုတ်ဆိတ်မွေး ရိတ်တဲ့ ဂျုတ်နဲ့ ရိတ်ပါတယ်။ ဆေးရုံ အကူလုပ်သားတစ်ဦးက ရိတ်တာပါ။
သူ့လက်ထဲမှာ ကိုင်လာတဲ့ ဂျုတ်ကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော် အတော်စိတ် ဆင်းရဲသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါးနဲ့ ဂျုတ်ကြားမှာ သွေးစသွေးနတွေနဲ့ အမွေးမည်းမည်းတွေ ကပ်ငြိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က အိပ်ရာပေါ်မှာ ပက်လက်၊ လူများ ထူမပေးမှ လှုပ်နိုင်တဲ့ အနေအထားကို ရောက်နေတော့ “ဖြစ်ချင်တာသာ ဖြစ်ပါစေတော့”ဆိုတဲ့ မထူးစိတ်နဲ့ သူ လုပ်သမျှ ငြိမ်ခံနေခဲ့ရပါတော့တယ်။
သည်အဖြစ်ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အိပ်မက်ဆိုး တစ်ခုပါပဲ။ အဲဒီ့ ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ကျွန်တော့် တင်ပါးဆုံခွက် ကွဲအက်သွားပါတယ်။ ဒဏ်ရာကြောင့် ခွဲစိတ် ကုသခံလိုက်ရပါသေးတယ်။ ခွဲစိတ် ကုသခံတဲ့အခါမှာတော့ ရန်ကုန်မှာပါ။ ထုံးစံအတိုင်း သွေးသွင်းခဲ့ရသေးတာလည်း အမှန်ပါ။
အခု၁၉၉၈ခုနှစ်မှာတော့ ကျွန်တော်လည်း လူကောင်းပကတိဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ၁၉၉၅လောက်မှာတုန်းက ရေယုန်တွေ ပေါက်လိုက်ပါသေးတယ်။ သည်ကြားထဲမှာ မကြာသေးခင်က သွေးစုနာတွေ ဟိုတစ်လုံး၊ သည်တစ်လုံး ထွက်လာတဲ့အပြင်၊ ဟိုနားက ယားလိုက်၊ သည်နားက ယားလိုက်နဲ့ဖြစ်နေတော့ ကျွန်တော်လည်း လန့်တန့်တန့် ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
အထက်မှာ ရေးခဲ့သလို ကျွန်တော်ဟာ သွေးဖောက် စစ်ပြီးတဲ့နောက် လိင်အပျော်အပါး လိုက်စားတဲ့အမှုကို လုံးလုံးကြီး ကင်းအောင် နေခဲ့ပါတယ်။ အရင်ကလိုတောင် အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုတွေကိုလည်း မကျူးလွန်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
မူးယစ်ဆေးနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ကလည်း အဝေးကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် ဆေးရုံပေါ်မှာ စိတ်မသတီစရာ ကောင်းလှတဲ့ အပ်နဲ့ ဆေးထိုးခံခဲ့၊ ရွံစရာ ကောင်းလှတဲ့ ဂျုတ်နဲ့ ခေါင်းရိတ် ခံခဲ့ရတဲ့အပြင်၊ သွေးသွင်းကုသမှုကိုပါ ခံယူခဲ့ဖူးသူအနေနဲ့ကျတော့ ဖြစ်နိုင်ချေတွေက အများကြီးရှိပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ မရှိရင်လည်း အကြောင်းဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပါ။ အခုကျတော့ ကျွန်တော်က စာလေးပေလေး ဖတ်ထားတဲ့အပြင် ကျွန်တော့် အလုပ် တာဝန်အရ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုရာနတ္ထိရောဂါ ယေဘုယျ အခြေအနေ စာတမ်းကို ပြုစုခဲ့ရဖူးသူလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီ့စာတမ်း အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေကို မေးမြန်းခဲ့ရတာမို့ သာမန်လူထက်စာရင် သည်ကိစ္စတွေကို တော်တော်လေး သိထားတော့တာပေါ့။
သည်ကြားထဲ ရေယုန်ပေါက်လို ပေါက်၊ ယားနာဖြစ်လို ဖြစ်၊ သွေးစုနာ ထွက်လို ထွက်တွေပါ ဖြစ်လာတဲ့အခါ ကျွန်တော့်မှာ နေစရာ မရှိတော့ဘူး။ ပိုဆိုးတာက ကျွန်တော်က သူများ အဲသလို ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းကို ရေးပြထားမိတဲ့သူ။
အဲတော့ ကျွန်တော် ပျာနေတာ မဆန်းလှပါဘူး။
နောက်ဆုံးမှာတော့ စိတ်နှလုံး ဒုံးဒုံးချပြီး ဆေးစစ်ဖို့ လုပ်ရပါတော့ တယ်။ ဟိုအနာ၊ သည်အနာလေးတွေကလည်း တော်တော်နဲ့ အသားနု မတက်နိုင် ဖြစ်နေတော့ ဆီးချိုများ ဖြစ်နေသလားဆိုပြီး စစ်ဖို့ပါ လိုအပ်နေတာနဲ့ တစ်ပါတည်း ပေါင်းစစ်ဖို့ စဉ်းစားရတာပါ။
အဲဒီ့နေ့က စနေနေ့ပါ။ ဆီးချိုကို ကျကျနန စစ်နိုင်ဖို့အတွက် ည ဆယ်နာရီကျော်တဲ့အချိန်ကတည်းက ရေက လွဲရင် ဘာဆို ဘာမှ မစားမသောက်ဘဲ နေထားခဲ့ပြီး မနက် ရှစ်နာရီမှာ သွေးသွားဖောက်ပါတယ်။
သွေးမဖောက်ခင် စာရင်းပေးတဲ့အခါမှာ ဆီးချိုနဲ့ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗှီ စစ်မယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့အခါ စာရင်းယူသူက ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် အဲဒီ့စားပွဲမှာ ထိုင်နေတဲ့ ဧည့်သည်တစ်ယောက်ကတော့ ကျွန်တော့်မျက်ခွက်ကို စူးစူးစမ်းစမ်း လှမ်းကြည့်ပါတယ်။ သူ့မျက်လုံးတွေက တစ်မျိုးတော့ တစ်မျိုးပါပဲ။ အထင်သေးသလိုလို၊ သနားသလိုလို အကြည့်မျိုးနဲ့ပါ။
တော်ပါသေးရဲ့၊ မြင်သာတဲ့ နေရာမှာ ဘာအနာမှ မရှိသလို၊ လူကလည်း ခပ်ဖိုင့်ဖိုင့်၊ အသားအရေကလည်း စိုစိုပြည်ပြည် ရှိနေပေလို့ပေါ့။ အဲလိုသာ မဟုတ်ရင် အဲဒီ့လူ ထများ ပြေးလေမလားပဲ။
ဆေးခန်းက စစ်ချက်ကို ၁၂နာရီခွဲမှ လာယူပါလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဘာမှ စောဒက တက်မနေတော့ဘဲ အိမ်တန်းပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ့နေ့ကတော့ တော်တော့်ကို ကသိကအောက် ဖြစ်ရတဲ့နေ့ပါ။
“အိပ်ခ်ျအိုင်ဗှီပိုး ရှိနေပြီဆိုတာ သေချာသွားရင်…”ဆိုတဲ့ အတွေးက တစ်ရံမလပ် ဖိစီးနေပါတော့တယ်။ သမီးက ကိုးနှစ်၊ သားက ခုနစ်နှစ် ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ကလေးတွေက ငယ်လှပါသေးတယ်။ သူတို့လေးတွေအတွက်လည်း ပူချင်သလိုလိုပါ။ ကျွန်တော့်မှာ ရှိနေပြီဆိုရင် ကျွန်တော့်ဇနီးမှာလည်း အလားတူ ဖြစ်ဖို့က သေချာသလောက်ပါ။
ဒါပေမယ့် သူတို့ထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပိုပူနေတာပါ။ ဓာတ်ခွဲခန်းက ပေးတဲ့အဖြေဟာ ပေါ့ဇတစ်ဗ်ှသာဆိုရင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ အတွေးက ဖိစီးနေပါတယ်။ ကြံရာမရတဲ့ အဆုံးမှာ တရားမှတ်ပါတယ်။ အခုတလော တရားလေးကို ကြိုးကြား မှတ်ဖြစ်နေတော့ နည်းနည်းတော့ နေသာသလို ရှိသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် စိုးရိမ်စိတ်က ပြန်ပြန်လွှမ်းလာတယ်။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း တဆုံး တွေးချလိုက်တော့တယ်။
ဟုတ်ပြီ၊ ကျွန်တော့်မှာ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗှီပိုးရှိနေတာ သေချာသွားပြီ ဆိုပါစို့။ ကျွန်တော် ဘာလုပ်မလဲ။
ပထမဆုံးအချက်က သည်ကိစ္စကို လူမသိအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ဖုံးထားဖို့ စဉ်းစားပါတယ်။ လူတွေက စာနာစိတ်နဲ့ ဆက်ဆံတော့မှာ မဟုတ်တာကို သိနေလို့ပါ။ အဲဒီ့ရောဂါပိုး ရှိနေပြီဆိုတာနဲ့ ကုဋ္ဌနူနာ ရောဂါသည်လို ကြဉ်ကြတော့မယ်ဆိုတာ သေချာနေပါတယ်။ အဲသလို ကြဉ်ကြတာလည်း ကျွန်တော့်မျက်မြင်ပါ။
အမှန်က သွေးချင်း ထိတွေ့မိစရာ အကြောင်းမရှိသမျှ ရောဂါ မကူးနိုင်ပါဘူး။ လေကသော်လည်းကောင်း၊ ခြင်ကသော်လည်းကောင်း၊ တံတွေးတို့၊ ဘာတို့ကသော်လည်းကောင်း အိပ်ခ်ျအိုင်ဗှီ ဗှိုင်းရပ်စ်ပိုးကို သယ်ဆောင်နိုင်ခြင်း အလျဉ်းမရှိတာမို့ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗှီ ရောဂါပိုးရှိသူနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာ၊ ထမင်းတစ်ဝိုင်းတည်း စားတာ၊ တစ်အိမ်တည်း အတူနေတာမျိုးဟာ ဘယ်လို မှ ရောဂါ မကူးနိုင်ပါဘူး။ ဆရာဝန်တိုင်းက သည်အချက်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ လူပြိန်းတွေဟာ လူတစ်ယောက်မှာ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗှီပိုး ရှိနေပြီဆိုတာနဲ့ သူတို့ကို ချက်ချင်း လက်ငင်းပဲ ကူးတော့မယ့်အတိုင်း ခပ်ရိုင်းရိုင်း၊ ခပ်ခွာခွာ နေလိုက်ကြဖို့ အားထုတ်တော့တာကို ကျွန်တော့်မျက်လုံးနဲ့ တပ်အပ် မြင်ဖူးထားပါတယ်။ အဲတော့ ကျွန်တော့်မှာ အဲလို ရောဂါ ရှိနေပြီဆိုတာကို အများသိအောင် ဖွင့်ပြောလို့ မဖြစ်ဘူးဆိုတာကို အလိုလို နားလည်နေပါတယ်။
ဖွင့်မပြောသည့်အတိုင် အနေအထိုင်ကိုတော့ ဆင်ခြင်ရတော့မှာပါ။ ကိုယ့်ရောဂါ၊ သူတစ်ပါးကို မကူးစေဖို့အရေးအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းဖို့၊ ကိုယ်သုံးတဲ့ လက်သည်းညှပ်၊ ဘီး၊ ဇွန်း၊ ခက်ရင်း၊ သောက်ရေခွက်၊ ဆပ်ပြာများကအစ သတ်သတ်ခတ်ခတ် ထားဖို့ကိုလည်း စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အခြေအနေနဲ့ဆိုရင် ရောဂါပိုးက ခပ်နုနုအဆင့်မှာပဲ ရှိလောက်ပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင် ကျွန်တော့်အတွက် အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်က အနည်းဆုံး သုံး၊ လေးနှစ်တော့ ကျန်ပါသေးတယ်။ ဆိုတော့ လူမရိပ်မိသေးသမျှ ကာလပတ်လုံး အလုပ်ကို ဖိလုပ်ပြီး ကျန်ရစ်သူ မိသားစုအတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး ရှာဖွေ စုဆောင်းပေးသွားဖို့ကို ဒုတိယအဆင့် စဉ်းစားပါတယ်။
ပြီးရင် ကျွန်တော် ရေးချင်လျက်နဲ့ ချမရေး ဖြစ်သေးတာတွေကို ဖိရေး သွားဖို့ စဉ်းစားပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗှီပိုး ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်း နောက်ဆုံးအချိန်မှာ တရားဝင် လူသိရှင်ကြား ရေးသားပြီး ကြေညာသွားဖို့ စိတ်ကူးလိုက်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး တစ်ချက်ကတော့ အချိန်ရှိသရွေ့ တရားအားထုတ်နေဖို့ပါ။ ပိုက်ဆံရှာတဲ့ အလုပ်၊ စာရေးတဲ့ အလုပ်တွေကို ဖိလုပ်ပြီး အချိန်အား ရသမျှမှာ သတိပဋ္ဌာန်တရားလေး ရှုမှတ်နေဖို့ကိုလည်း တစ်ပါတည်း စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။
အဲတော့မှ စိတ်က နည်းနည်း ငြိမ်သွားတယ်။ တရားကိုလည်း ပြန်လည် ရှုမှတ်လို့ ရသွားတယ်။
ဆယ့်နှစ်နာရီ ခွဲပြီးတဲ့ နောက်
ဆေးခန်းက ချိန်းလိုက်တဲ့အချိန် ၁၂ နာရီခွဲကျတော့ ကျွန်တော် ရှောင်လိုက်ပါတယ်။ ဆေးစစ်ချက်ကို သွားမယူသေးပါဘူး။
နေ့ခင်း သုံးနာရီမှာ မြို့ထဲဆင်းပြီး သင်တန်းတစ်ခု တက်စရာရှိနေတာနဲ့ အဲဒီ့အချိန်ကျမှပဲ တစ်ပါတည်း သွားယူလိုက်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာပါ။ အမှန်ကတော့ ဆေးစစ်ချက်ကို သိလည်း သိချင်လှတယ်၊ သိရမှာလည်း မရဲသလိုဖြစ်နေတာ။
ဒါနဲ့ အိမ်မှာပဲ လှည့်ပတ်ပြီး နေနေလိုက်တယ်။ ကလေးတွေနဲ့ ဆော့လိုက်၊ သီချင်းလေး ဖွင့်နားထောင်လိုက်၊ စာအုပ်ကလေးတစ်အုပ်လောက် ကောက်လှန်လိုက်နဲ့၊ ဂဏှာ မငြိမ့်တငြိမ်ပေါ့။
နှစ်နာရီ ထိုးခါနီးကျတော့ ရေဝင်ချိုးတယ်။ ရေချိုးအပြီးမှာ စိတ်က သိသိသာသာကြီးကို ပိုလှုပ်ရှားလာတယ်။ အဝတ်အစားလဲ၊ သင်တန်းနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းတွေ ထည့်၊ ပြီးတော့ ကားသော့ယူ၊ အိမ်က ထွက်။ လှေကားတစ်ဝက် ရောက်တော့မှ ပါလေရာ တယ်လီဖုန်းလေး ကျန်ရစ်ခဲ့တာကို သတိရလို့ တစ်ခေါက် ပြန်တက်၊ တံခါးခေါက်၊ ဖုန်းယူ။
စိတ်က တော်တော့်ကို လှုပ်နေပြီ။ ကားမောင်းရင်းနဲ့ သတိပဋ္ဌာန်ဘက်ကို စိတ်ပြောင်းရပြန်တယ်။ ဂီယာကို ထိုးထည့်လိုက်တာ၊ ဘယ်ဘက်ခြေကို အကြွမှာ ညာဘက်ခြေဖျားကို ဖိနင်းလိုက်တာ၊ မျက်စိက လမ်းပေါ်ကို ကြည့်နေတာ၊ တစ်ခုစီ သိနေအောင် အားထုတ်နေမိတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒါလည်း ခဏပဲ။ တော်ကြာနေတော့ “ပေါ့ဇတစ်ဗှ်” ဖြစ်နေရင်ဆိုတဲ့ အတွေးက ဝင်လာတယ်။ ခြေဖျား၊ လက်ဖျားတွေတောင် အေးတေးတေး ဖြစ်လာသလိုပဲ။ ကားထဲက လေအေးစက်ကို ဖွင့်ထားပေမယ့် ချွေးကလည်း ပြန်ချင်ချင်ရယ်။
သီချင်းခွေကို ထိုးထည့်လိုက်တယ်။ “အိပ်မပျော်သော ညများ” သီချင်း သံပေါ်လာတော့ လိုက်အော်နေလိုက်တယ်။ ပါးစပ်ကသာ အော်နေတာ၊ လက်နဲ့ ခြေတွေကလည်း ကားမောင်းတဲ့ အလုပ်ကို ဖိဖိစီးစီးသာ လုပ်နေတာ၊ မျက်စိကလည်း လမ်းမကို မမှိတ်မသုန်သာ ကြည့်နေတာ၊ စိတ်ကတော့ဗျာ၊ “ပေါ့ဇတစ်ဗှ်”သာ ဖြစ်နေရင်ဆိုတဲ့ တဝဲလည်လည်ထဲမှာ နစ်မြဲနစ်လျက်ပဲ။
သည်လိုနဲ့၊ ဆေးခန်းနဲ့ နီးသထက် နီးလာတယ်။ အဲဒီ့အခါ နေ့လည်က အိမ်မှာ တွေးထားတဲ့ အတွေးက ပိုမို ခိုင်မာလာတယ်။
ပေါ့ဇတစ်ဗ်ှဆိုလည်း ဘာအရေးလဲ။ လုပ်စရာ ရှိတာတွေကို အဆင်သင့် စဉ်းစားထားပြီးသားပဲ။ လူမသိအောင်ဖုံးလို့ ရနိုင်သမျှ ဖုံးထားမယ်၊ ဒါပေမယ့် လူတွေကို ရောဂါမကူးအောင် ကိုယ့်ဘာသာ အစွမ်းကုန် ဆင်ခြင် နေထိုင်မယ်၊ ပြီးရင် ပိုက်ဆံ ရှာနိုင်သမျှ ရှာမယ်၊ စာတွေ ရေးနိုင်သမျှ ရေးမယ်၊ တရားကိုလည်း အချိန်ရှိသမျှ အားထုတ်မယ်။ သေတာကတော့ သေမှာပဲ၊ အခုမသေလည်း နောက်တော့ သေကို သေရဦးမှာပဲ။ လောလောဆယ် မသေသေးတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်…
အဲသလို တွေးချလိုက်တဲ့အခါ စိတ်က နည်းနည်းပြန်ငြိမ်သွားပြန်တယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ဆေးခန်းနဲ့ အနီးဆုံးနေရာမှာ ကားကို ရပ်လိုက်ရပြီ။
ကားပေါ်က အဆင်းမှာ စိတ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး စုစည်းပြီးသွားပြီ။
နေဦး… တစ်ခုကျန်နေသေးတယ်။ မိသားစုကိုရော ဖွင့်ပြောရမလား။ ဇနီးသည်ကိုတော့ ဖွင့်ပြောလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်။ သူ စိတ်ခိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ မခိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ ပြောပြလိုက်တာက အားလုံးအတွက် ကောင်းတယ်။ သူ့ကိုတော့ ချက်ချင်း ပြောမှ ဖြစ်မယ်။
အံ့ဩဖို့ ကောင်းတာတစ်ခုက အဲသလို စိတ်နှလုံးလည်း ဒုံးဒုံးချပြီးသွားတဲ့ အခါ ကျွန်တော် အတော် တည်ငြိမ်သွားတယ်။ ဆေးခန်းကို လှမ်းနေတဲ့ ခြေထောက်တွေက လေးတိလေးကန်လည်း ဖြစ်မနေတော့ဘူး။
ဆေးခန်းထဲကို ရောက်တော့ ငွေပြေ ရှင်းထားခဲ့တဲ့ ပြေစာကို ထုတ်ပြလိုက်တယ်။ တာဝန်ခံက “၁၂ နာရီခွဲ ချိန်းထားတဲ့ဟာလား”လို့ မေးတော့ “ဟုတ်ကဲ့”လို့ ဖြေတဲ့ ကျွန်တော့်အသံကိုလည်း ကျွန်တော် သဘောကျသွားတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်း တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ။
တာဝန်ခံက စာရွက်ထပ်ကို မွှေနေတယ်။ အဖြေက ပိုးတွေ့၊ မတွေ့ တစ်ခုခုပဲ။ တွေ့လည်း တွေ့တာပေါ့။ တခြားသူတွေလို သည်ဆေးခန်းက မဟုတ်နိုင်သေးပါဘူး၊ မှားချင် မှားနေမှာပါဆိုပြီး နောက်တစ်နေရာ ပြောင်းပြီး စစ်ဖို့လည်း စိတ်မကူးပါဘူး။
တာဝန်ခံက စာရွက်တစ်ရွက်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော့် မျက်လုံးက ဇယားကွက်တွေရဲ့ တစ်နေရာကို တန်းခနဲ ရောက်သွားတယ်။
သည်ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ ကျွန်တော်တို့ရုံးက ဝန်ထမ်းတွေအားလုံး နှစ်စဉ်၊ ဆီး၊ ဝမ်း၊ သွေး စစ်နေကျ။ ကျွန်တော်တို့ရုံးက ဝန်ထမ်းအားလုံးကို နှစ်စဉ် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပေးတဲ့ အလေ့အထ ရှိတယ်လေ။
အဲတော့ သည်ဓာတ်ခွဲခန်းကထုတ်တဲ့ သွေးစစ်ချက် စာရွက်ရဲ့ညာဘက် ကော်လံထိပ်မှာ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗှီပိုး စစ်တာကို ပြတဲ့နေရာ ရှိမှန်းသိနေတယ်။ ကျွန်တော် ကြည့်လိုက်တော့ အဲဒီ့နေရာလပ်မှာ တံဆိပ်တုံးနဲ့ NEGATIVE လို့ နှိပ်ထားတာကို တွေ့သွားတယ်။
ကျွန်တော့်ရင်ထဲက အလုံးကြီးလည်း အဲတော့မှပဲ လှိုက်ခနဲ ကျသွားပါတော့တယ်။ ဆီးချိုအတွက် သွေးထဲက ဂလူးကို့စ် ပါဝင်မှုနှုန်းကို ကြည့်လိုက်တော့ ၉၆ တဲ့။ စံညွှန်းကိန်းများအရ အစာမစားဘဲ စစ်ရင် ၈၀ မှ ၁၁၀ အတွင်း ရှိနေရမယ်လို့ ဆိုတဲ့အတွက် ဆီးလည်း ချိုမနေဘူး။ ပုံမှန်ဆိုတာ သိလိုက်တယ်။
ဓာတ်ခွဲခန်း တာဝန်ခံက “နှစ်ခုစလုံး ကောင်းပါတယ်”လို့ ကျွန်တော့်ကို ပြောတော့ ကျွန်တော်လည်း ဘာမှ ပြန်ပြောမနေတော့ဘဲ ခေါင်းကိုသာ ညိတ်ပြလိုက်တယ်။ စိတ်ထဲမှာ အတော့်ကို ပျော်သွားပြီ။ နေရထိုင်ရတာလည်း ပေါ့ပါး လွတ်လပ်သွားပြီ။
ဆေးခန်းက ပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါ ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေက မြေကြီးနဲ့တောင် ထိမနေတော့ဘူး ထင်ရအောင်ကို ပေါ့ပါးနေပါတော့တယ်။
အဲဒီ့နေ့က တွေ့သမျှ လူတိုင်းကိုလည်း ကျွန်တော့် အပျော်တွေ မျှပေးမိသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် NEGATIVE ဆိုတာကို မမြင်လိုက်ရသေးခင်အထိ ခံစားနေရတဲ့ ခံစားမှုကိုတော့ တစ်သက်တာ မေ့လို့ရမယ် မထင်တော့ဘူး။ တကယ့်ကို အူလှိုက်သည်းလှိုက် ပူပန် ထိတ်လန့်နေခဲ့ပုံများလေ။ စာနဲ့ ရေးပြလို့ကတော့ သည်လောက်ပဲ ရေးတတ်ပါတယ်။ ပြောမယုံ၊ ကြုံဖူးမှ သိနိုင်မယ့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုမျိုးမို့ သည့်ထက်လည်း ပိုရေးမပြတတ်တော့ပါဘူး။
တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ၊ ရောဂါပိုးသာ ကျွန်တော့် သွေးထဲမှာ ရှိနေခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ တေးပြီး စဉ်းစားထားခဲ့သမျှကိုလည်း ပြန်သတိရတယ်။
ကျွန်တော့်အသက် ၄ ၀ကျော်ပါပြီ။ အမှည့်တဝင်းဝင်း၊ အကင်းတဖြုတ်ဖြုတ်ဆိုသလိုပဲ၊ ကျွန်တော်နဲ့ မတိမ်းမယိမ်းတွေ၊ ကျွန်တော့်ထက် ငယ်သူတွေရဲ့ နာရေးကြော်ငြာတွေကိုလည်း နေ့စဉ် တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သေခြင်းတရားဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တစ်ကမ်းမှာ ချောင်းနေတဲ့ မုဆိုးပါ။
ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်ကာလမှာ ရောက်လာမယ်၊ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်ကာလမှာ သေမိန့်ကို ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ သေချာတိကျ မပြောနိုင်ပါဘူး။ မသေခင်ကာလမှာတော့ မာန်တွေ၊ မာနတွေ၊ ပညာတွေ၊ ဂုဏ်တွေ၊ ဥစ္စာဓနတွေ၊ မုန်းခြင်း၊ ချစ်ခြင်းတွေ၊ နာကျည်းခံပြင်းတာတွေ၊ ပျော်ရွှင်တပ်မက်တာတွေနဲ့ နေလို့ ကောင်းနေပါတယ်။
တကယ်လို့သာ လူတစ်ယောက်ဟာ မုချမသွေ သေရတော့မယ်ဆိုတာကို ကြိုသိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲဒီ့လူဟာ တည်ငြိမ်နိုင်ပါ့မလား။ သေရမှာကို ထားဦး၊ သေနိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးတစ်ခု ငါ့သွေးထဲမှာလည်း ရှိချင် ရှိနေနိုင်ပါလား ဆိုတာကိုတွေးရင်း အဖြေကို စောင့်နေဆဲ ကာလမှာတောင် စိတ်ဆင်းရဲပြီး ဆောက်တည်ရာ မရချင်သလို ဖြစ်နေခဲ့တာကိုတော့ ကိုယ်တွေ့သိခဲ့ပါပြီ။
သေရတော့မယ်ဆိုတာကို မသေချာသေးချိန်မှာတောင် သည်လောက် ဆောက်တည်ရာမရ ဖြစ်နေရသေးရင် သေရတော့မယ်ဆိုတာကို သိနေလေတဲ့ ကုရာနတ္ထိ ရောဂါသည်တွေ၊ ကင်ဆာရောဂါ ခံစားနေသူတွေရဲ့ ရင်မှာ ဘယ်လိုများ နေလေမလဲဆိုတာကို မှန်းဆနိုင်ကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကုရာနတ္ထိဝေဒနာကို ခံစားနေရသူတွေအတွက်ပါ။
သူဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်၊ အဲသလို ရောဂါသည်တွေကို စာနာ သနားဖို့ အင်မတန် ခက်ပါတယ်။ လိင်အပျော်အပါး လိုက်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတဲ့ကိစ္စမျိုးမို့ သည်လောက်တောင် ပွေလီတဲ့သူ၊ မိုက်တဲ့သူ၊ သူလုပ်သမျှ သူခံရတာပဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့ အဲဒီ့ ဝေဒနာရှင်တွေအပေါ် စာနာပေးဖို့ဆိုတာ အင်မတန် ခက်ပါတယ်။
သွေးသွင်း ကုသရာကဖြစ်စေ၊ မသန့်ရှင်းတဲ့ ဆေးထိုးအပ်ကဖြစ်စေ ကူးစက်လာတယ်ဆိုဦးတောင် တော်ရုံတန်ရုံ လူယောက်ျားတစ်ယောက် အဲဒီ့ ရောဂါ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကို ပတ်ဝန်းကျင်က လီဆယ်နေတယ်လို့ ထင်နေမိကြဖို့ကလည်း သေချာသလောက်ပါ။
ဒါပေမယ့် သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ လောကမှာ ဘယ်လိုလူမျိုးပဲ ဖြစ်နေပါစေ၊ လူမိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူလိမ်မာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချမ်းသာ၊ ဆင်းရဲ၊ ဆူကြုံ နိမ့်မြင့် မဟူ၊ သေရတော့မယ်၊ မလွဲမသွေ သေရတော့မယ်ဆိုတာကို သေချာဂန သိနေချိန်မှာတော့ ဘယ်သူမှ သေချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆေးသမားမို့လို့ မူးယစ်ဆေးဝါးလေး မှီဝဲချင်သေးလို့၊ အပျော်လိုက်သူမို့ ရိက္ခာ ယူချင်သေးလို့၊ ပညာရှင်ကြီးမို့ လောကကို အကျိုးပြုချင်သေးလို့ အသက်လေး ဆက်ရှူနေချင်သေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သတ္တဝါတို့ရဲ့ အသက်ကို ခင်တွယ်မှု သဘောအရ ရတတ်သလောက်ကလေး နေလိုက်ချင်တာပါ။
အဲသလို နေချင်သေးတာနဲ့အတူ နေရသလောက်လေးမှာလည်း မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ ပြုစုယုယမှု၊ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို ခံယူချင်မှာလည်း လူတိုင်းပါပဲ။ လူဆိုးမို့ မလိုချင်ဘူး၊ လူကောင်းမှ လိုချင်ရမယ်လို့လည်း ပြောလို့ဖြစ်တာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ထို့အတူ စာနာမှု၊ ယုယမှု၊ အားပေးမှုဟာ သေရမယ့်သူချင်းအတူတူ၊ လူဆိုးနဲ့ မထိုက်တန်ဘူး၊ လူကောင်းနဲ့သာ ထိုက်တန်တယ်လို့လည်း ပြောလို့လည်း မရနိုင်ဘူး။
အဲတော့ နေရသခိုက်လေး၊ သူတို့တွေရဲ့ ရှိစု၊ မဲ့စု ရှင်ခွင့်ရနေခိုက်လေးမှာ သူတို့တွေရဲ့အမှားတွေ၊ အပြစ်တွေ၊ ကျူးလွန်မှုတွေကို ခဏလောက် မေ့ဖျောက်ပေးထားပြီး လူသားချင်း စာနာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ ဖေးမနိုင်မယ်ဆို ရင်တော့ “ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းကြပါစေ၊ ရောဂါခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းကြပါစေ၊ နှလုံးစိတ်ဝမ်း ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ”လို့ လူကြားလို့ ကောင်းအောင် ကြေးစည်လေးထုထုပြီး အော်နေတာထက် ပိုပြီး ကုသိုလ် ရနိုင်လေမလားလို့ စဉ်းစားနေမိရပါတယ်။
(၁၉၉၉ ဧပြီလထုတ် ရွှေအမြုတေမဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ စာပေလောက စာအုပ်တိုက်က ပထမအကြိမ်၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ လက်တွဲဖော်စာအုပ်တိုက်က ဒုတိယအကြိမ် ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ အတ္တကျော်ရဲ့ “တွေးတောဆင်ခြင်မှု အနုပညာ”စာအုပ်ထဲက စာတစ်ပုဒ်ကို ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်တာပါ။)
Author lettwebawPosted on6December 2009 17 February 2010 Categories Reproduction, Thoughts
9 thoughts on “Disconcerting Experience”
Moe Cho Thinn says:
6 December 2009 at 7:32 am
ကိုယ်တွေ့နဲ့ ယှဉ်ပြီး ရေးတဲ့စာမို့ ထင်ပါရဲ့။ ဖတ်ရတာ သင်ခန်းစာယူစရာ ပညာယူစရာ တွေးစရာတွေ ပါတဲ့ စာပါပဲ။ သဘောကျ နှစ်သက်မိပါတယ်။ သွေးအဖြေ မရခင်အထိ စာဖတ်သူပါ လိုက်ပူနေရတော့တာ..။
အင်းးး ပူစရာအကြောင်းတွေ ရှိနေတော့လဲ ပူရတာကိုးလေ.. :))
7 December 2009 at 3:54 am
ကျမမှာလဲ အကိုတယောက်ရှိတယ် ကြည့်ရတာတော့ ပေါ့စတစ်ပဲ ဖွင့်မပြောဘူး။ အသဲကင်ဆာလို့ ညာနေတယ်။ တသက်လုံး အလုပ်မယ်မယ်ရရမလုပ်ပဲ ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့စားပြီး သူ့မိသားစုတာဝန်သူများကို ပေးလွန်းလို့ စကားမပြောတာကြာပြီ။ ခုတော့ သူမကြာခင် သွားရတော့မယ်လေ ဆိုပြီး သနားလို့ ပြန် ကြင်ကြင်နာနာဆက်ဆံနေမိတယ်။ ဒါပေမဲံ့
သူကမှ အချိန်မှန်းနိုင်သေးလို့ ပြင်ဆင်ချိန်ရသေးတယ်။ ကိုယ်တိုင်က မနက်ဖန် ဘာဖြစ်မယ် မသိနိုင်သေးဘူး။ ကံတရားက ပြောရခက်တယ်။
8 December 2009 at 8:31 am
အိုးအို.. သည်းထိတ်ရင်ဖိုကြီးပါလား.. အေနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပဲ နှလုံးရောဂါနဲ့ ခေါက်ကနဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်.. မသေလို့တွေ့ရတာပါလား။
5 January 2010 at 5:52 pm
ဖတ်ရင်းလက်တွေ အေးလာတာ ကြက်သီးတောင် ထတယ် တော်ပါသေးရဲ့နော်..။ သက်ပြင်းရှည်ကြီးချမိပါတယ်ရှင်။
6 January 2010 at 11:09 am
10 January 2010 at 5:15 pm
ဆရာ့ ရည်ရွယ်ရင်းက တစ်ခုပေါ့လေ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံဖူးတာက HIV ဝေဒနာရှင်တစ်ယောက်နဲ့ပါ။ သာမန်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရုံနဲ့မကူးဘူးဆိုတာသိပေမဲ့ သူနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော့်တစ်သက်မှာ တစ်ခါမှ မခံစားရဖူးတဲ့ ခံစားချက်တစ်မျိုးဖြစ်မိတယ်။ ကြောက်တာလား၊ ရွံ့တာလား..ဘာမှန်းကိုမသိလိုက်ဘူး။
သူနဲ့စကားပြောနေချိန်မှာ ကျွန်တော့်မျက်နှာပျက်နေတာမသိရအောင် ဟန်ဆောင်နေခဲ့ရတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း အပျော်အပါးနဲ့ HIV ကူးစက်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းမှန်သမျှ ကျွန်တော်ရှောင်တော့တာပဲ။
26 February 2011 at 12:50 pm
I had an unprotected sex withawoman(not with prostitute). Now I’m so worried about STD.
After how many months/weeks I should do medical check up? In some books say after 12 weeks. Is it correct?
26 February 2011 at 1:04 pm
First signs of other STDs may show withinafew weeks. Those signs include irritation in your genitals and/or some irritation while urinating, as well as some body fluids leaking from your penis. However there’sawindow period for HIV infection, whereas the presence of the virus cannot be detected until after 12 weeks. If you don’t have any signs of other STDs, you should have your blood tested after 12 weeks. Please take this incidenceaserious lesson for you to learn. Never ever have unprotected sex again!
9 April 2011 at 1:11 pm
Thank you so much sayar.
Previous Previous post: Negative Effects of Negative Commands
Next Next post: Both Old and Young to Ponder